"Guusha aan taajirka ku noqday waxay ka billaabatay fiisa la isiiyay" - BBC News Somali
"Guusha aan taajirka ku noqday waxay ka billaabatay fiisa la isiiyay"
Lahaanshaha sawirka 8x8
Image caption Vik ayaa u haajiray Maraykanka 1984
Waa markale iyo taxanihii qormooyinka BBC-da ee The Boss ee aan kaga hadlaynay dadka guulaha ka gaaray xagga ganacsiga, waxaanan todobaadkan kusoo qaadanaynaa ninka lagu magacaabo Vik Verma oo ka mid ah dadka tagay Maraykanka.
Waa arrin ay adagtahay maanta in Maraykanka lagu arko qof sida Vik oo kale oo guulahan gaaray, gaar ahaan xilli shuruucda muhaajiriinta ay sii adkaanayaan.
Sannadkii 1984-tii oo uu Vik 18 jir ahaa ayuu damcay in uu jaamacad u aado dalka Maraykanka, isaga oo xiligaas ku sugnaa dalkiisii Hindiya.
Wuxuu fiiso ka doontay qunsuliyadda Maraykanka ee magaala Kolkota, balse nasiib darro waa loo diiday fiisihii.
Hase yeeshee, Vik waxa uu sheegay in uusan ku qancin go'aankaas, saacado kaddibna uu dib ugu laabtay isla qunsuliyaddii, wuxuuna sargaalkii qunsuliyadda u sheegay in uu 'gaaray go'aan qaldan, islamarkaasna aanan ahayn mid caddaalad ah', Intaas markii aan iri kaddib, sargaalkii wuxuu yiri waxaan ka heley dhiiranaantaada, waanan ku siiyay fiisaha".
Lahaanshaha sawirka Samantha Clayton
Image caption Vik iyo ardeyii ay isla dhiganayeen Florida Institute of Technology
Wixii markaas ka dambeeyay, Vik wuxuu bilaabay safarkii guusha.
Hadda wuxuu madax ka yahay shirkad xagga tiknolojiyadda ah oo lagu magacaabo 8x8 oo sannad kasta sameysa malaayiin doolar.
Fadhigeedu waa magaalada Dooxada Silicon Valley ee inta badan shirkadaha tiknoolajiyadda fariisinka u ah, waxay shirkadiisa bixisaa adeeg ah qalabka la'iska arko ee lagu galo shirarka iyo waliba adeegyo kale oo ah xagga codadka.
Nin taajir ah oo sannadkii oo dhan canshuur ahaan u bixiyey $44 doolar oo kaliya ah
Maalqabeen 50,000 oo doolar ku iibsaday mir aanan micno badan ku fadhin
Shirkadda 8x8 waxa lacagaha ay sannadkii kala rogto lagu qiyaasay $297 milyan oo doolar, waxayna ka mid tahay kuwa ku diiwaansan Suuqa Saamiyadda New York.
Markii uu Vik ka qalin jabiyay jaamacadda sannadkii 1987-dii, isaga oo qaatay shahaado xagga korontada ah, wuxuu u sii gudbay jaamacadda Michigan, kaddibna wuxuu u bedashay jaamacadda Stanford ee California.
Image caption Dhammaan shaqaalaha 8x8 ayay tahay in ay hadal ka hor jeediyaan guddiga maamulka shirkadda
Markii uu qalinjabiyay wuxuu bilaabay shirkad lagu magacaabo Savi Technology, taas oo shaqadeedu aheyd in lagula socdo xamuulka iyo alaabaha ay leedahay wasaaradda difaaca Maraykanka ee daafaha adduunka ku kala sugan, waxaana adeeggan markii dambe isticmaalay dalka UK iyo dalalka xubnaha ka ah NATO.
Muddo 10 sanno ayuu mulkiile ka ahaa shirkaddaas, illaa ugu dambeyntii ay ka iibsatay wasaaradda, sannadkii 2006-dii. Waxa laga siiyay lacag u dhow nus bilyan oo doolar.
Inkasta oo uu awoodday in uu hawlgab iska noqdo, haddana VIK wuxuu doortay in uu kasii shaqeeyo shirkadda Lockheed oo ay wasaaradda gaashaandhigga leedahay muddo 7 sanno ah, ka hor intii uusan ka tagin, sannadkii 2013-kii, xilligaas oo uu asaasay shirkadiisa 8x8.
Markii la weeydiiyay xikmadda ka dambeysa magaca ayuu sheegay in uu tiro ka bilowdo, taasna micnaheedu yahay in markasta uu ugu sareeyo magacyada marka lagu taxo looxa suuqa saamiyadda maadaamaa loo qoro sida ay u kala horeeyaa xarfaha iyo tirooyinka.
Shirkadan waxa ay la wareegtay shirkado yaryar oo ay ganacsiga ku wada jireen, waxaana hadda ka shaqeeya illaa 400 oo qof.
Image caption Vik
Vik wuxuu hadda doonayaa in shaqaalaha shirkadda ay ku kordhaan illaa 300 qof oo kale sannad kasta,
Qof kasta oo shaqaalaha ka mid ah wuxuu shirkadda ku leeyahay saami, xitaa kuwa ugu hooseeya, wuxuuna Vik qabaa in qof kasta uu dareemo lahaanshiyo.
Image caption Shaqaalaha cusub ee 8x8
Dhammaan shaqaalaha cusub waxaa caado u ah in ay hadal ka hor jeediyaan guddiga maamulka, wuxuuna Vik qabaa in taas ay direyso labo fariimood oo ah in qofkaas aragtidiisa ay muhiim tahay, islamarkaasna uu yimid meel looga in uu muhiim ka yahay.